Amathikithi esitimela eshibhile e-SBB Nemigwaqo Yezindlela Zokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi esitimela eshibhile e-SBB Nemigwaqo Yezindlela Zokuhamba
Ikhaya > Amathikithi esitimela eshibhile e-SBB Nemigwaqo Yezindlela Zokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi esitimela eshibhile eSBB futhi Izintengo zokuhamba ze-SBB kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-SBB nge-Train Highlights
2. Mayelana ne-SBB 3. Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Elishibhile Lesitimela SBB
4. Abiza malini amathikithi e-SBB 5. Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha izitimela ze-SBB, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kweZinga, Ukudlula kosuku, ne-Supersaver ku-SBB 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-SBB
8. Kufika isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba i-SBB ifike 9. Yini amashejuli wesitimela se-SBB
10. Yiziphi iziteshi zezitimela eziphakelwa yi-SBB 11. Imibuzo Evame Ukubuzwa yeSBB
I-SBB nge-Train Highlights
I Izitimela ZaseSwitzerland, I-SBB, yinkampani kazwelonke yezitimela esebenza eSwitzerland.
Izitimela ze-SBB zibalwa phezulu ezinhlelweni zikazwelonke zezitimela eYurophu, futhi 2017 ibekwe kuqala ngekhwalithi yenkonzo yabo, simo sokuphepha, nenkomba yokusebenza.
25 abagibeli abayizigidi abahamba nge-SBB nsuku zonke.
Insizakalo yesitimela ye-SBB ingenye yezinsizakalo zesitimela ezigcina isikhathi emhlabeni, nokuncane kune- 3 ukubambezeleka kwemizuzu ngokwesilinganiso.
Umhubhe wesitimela omude kunayo yonke we-SBB, umhubhe we-Gotthard Base, ku Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland, izinyathelo 57.1 amakhilomitha bese ubeka irekhodi lomhlaba.
I-SBB inayo 3 izilimi ezisemthethweni: IsiJalimane, IsiFulentshi, nesiNtaliyane. Ngakho-ke, Iziteshi zezitimela ze-SBB ziqanjwa amagama futhi zimakwe ngokuhambisana nendawo: amagama eziteshi nezimpawu emadolobheni akhuluma izilimi ezimbili kukhona ngazo zombili izilimi zendawo, nokuthi kungani ungabona igama kwesinye isikhathi kanjena I-SBB CFF FFS.
I-SBB iyisevisi yesitimela yaseSwitzerland engenye yezinto ezihamba phambili emhlabeni.
Inkampani yesitimela kazwelonke yaseSwitzerland isebenza kulo lonke elaseSwitzerland, nge 798 zezitimela, futhi 721 amathikithi esitimela amaphuzu okuthengisa. Inkampani yesitimela i-SBB ingaphansi kukahulumeni kusukela ngoJanuwari 1, 1999, okusho ukuthi izwe likahulumeni liphethe 100% wamasheya.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi e-SBB
Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Elishibhile Lesitimela SBB
inombolo 1: Thola amathikithi akho e-SBB kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Amathikithi esitimela e-SBB ayatholakala ku-inthanethi kuze kube 60 izinsuku ngaphambi kosuku lwakho lokuhamba. Lapho u-oda amathikithi esitimela ngaphambi kwesikhathi, uthola amathikithi ashibhile futhi amathikithi esitimela eshibhe kakhulu we-SBB anciphe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, Izintengo zamathikithi esitimela e-SBB ziyenyuka njengoba usuku lwakho lokuhamba lusondela, ukuze wonga imali ngokuthenga kwakho ithikithi lesitimela le-SBB, thola amathikithi akho esitimela kusengaphambili. Ukonga imali kumathikithi esitimela e-SBB, thenga amathikithi akho kusenesikhathi.
inombolo 2: Ukuhamba nge-SBB ngezikhathi ezingekho ngaphezulu
Amathikithi esitimela e-SBB eshibhile ezikhathini ezingekho phezulu, ekuqaleni kwesonto, futhi emini. Ungaqiniseka ukuthola athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhile phakathi nesonto. Ngolwesibili, NgoLwesithathu, nangoLwesine, Amathikithi esitimela e-SBB angonga kakhulu. Ngenxa yevolumu ye- ngezamabhizinisi uya emsebenzini ekuseni nakusihlwa, amathikithi esitimela abiza ngaphezulu. Ngakho, kushibhile kakhulu ukuhamba noma kunini phakathi kwemini nokuhlwa. Impelaviki kungenye yezikhathi eziphakeme zezitimela, ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Izintengo zamathikithi esitimela e-SBB nazo ziyenyuka ku amaholide omphakathi namaholide esikole.
inombolo 3: Oda amathikithi akho e-SBB uma uqinisekile ngohlelo lwakho lokuhamba
Izitimela ze-SBB zifunwa kakhulu, futhi kuphela 2 ezinye izinkampani zesitimela njengomncintiswano, njengamanje zihlala ziyikhethelo eliphakeme lezitimela eSwitzerland. Bangakwazi ukubeka imikhawulo yamathikithi esitimela efana naleyo abanayo evimbela ukushintshwa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kuwuhlobo lwebhizinisi lethikithi. Yize kusenamawebhusayithi lapho ungathengisela abantu amathikithi akho amasekeni, I-SBB ayikuvumeli ukuthengiswa kwamathikithi angamasekeni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho kuphela uma uqiniseka ukuthi uhlelo lwakho luzokusindisa ekubhukeni ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuqhamile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-SBB ku-Save A Train
Gcina isitimela kukhulu kunakho konke, okuncono, namadili ashibhile kakhulu amathikithi wesitimela eYurophu. Ukuxhumana kwethu nabasebenzi abaningi bezitimela, imithombo yamathikithi esitimela, kanye nolwazi lwethu lobuchwepheshe be-algorithms kusinika ukufinyelela kumathengi ashibhile wesitimela. Asinikezi kuphela amadili amathikithi esitimela ashibhile e-SBB kuphela; sinikeza okufanayo nakwezinye izindlela ze-SBB.
Amanani entengo yaseLyon kuya eBasel
IZurich kuya eBasel Amanani Esitimela
Amanani eParis aya eBasel Train
ILucerne iye eBasel Izintengo Zesitimela
Abiza malini amathikithi e-SBB?
Amathikithi e-SBB aqala kusuka ku- € 12.50 aze afike ku- € 125 ohambweni olulodwa lwesitimela. I Intengo yethikithi lesitimela le-SBB kuya ngokuthi hlobo luni lwethikithi, uya khona, futhi lapho ukhetha ukuhamba:
Okujwayelekile € 12.50 – € 35 € 28 – € 55
Isigaba sokuqala € 50 – € 95 € 50 – € 125
Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha izitimela ze-SBB, futhi ungahambi ngendiza
1) Ufika e Isikhungo sedolobha. Lokhu kungenye yezitimela ze-SBB uma kuqhathaniswa nezindiza. Izitimela ze-SBB nakho konke okunye ukuhamba ngesitimela kusuka noma yikuphi edolobheni kuya enkabeni yedolobha elilandelayo, akunandaba ukuthi ngabe yi- isiqiwu semvelo noma isigodi. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, Geneva, I-Basel, Zermatt, noma iZurich, Izikhungo zamadolobha ziyinzuzo enkulu yezitimela ze-SBB!
2) Ukuhamba ngezindiza kudinga ukuthi ube sesikhumulweni sezindiza okungenani amahora ambalwa ngaphambi kwesikhathi sakho sendiza. Kufanele uhlole ukuphepha ngaphambi kokuvunyelwa ukugibela indiza. Ngezitimela ze-SBB, kufanele nje ube esiteshini ungaphansi kwehora kusengaphambili futhi kwesinye isikhathi ube ngaphansi nangaphansi. Lapho futhi ubheka isikhathi okuthatha ngaso ukusuka esikhumulweni sezindiza uye enkabeni yedolobha, uzobona ukuthi izitimela ze-SBB zingcono uma zizonke isikhathi sokuvakasha.
3) Ebusweni, intengo yamathikithi esitimela e-SBB ibukeka ibiza kakhulu kunamathikithi womoya wesabelomali. Nokho, lapho uqhathanisa wonke amacala abandakanyekile, Amathikithi esitimela e-SBB anesivumelwano sentengo esingcono. Ngezinye izindleko ezinjengezindleko zemithwalo okungafanele uzikhokhele ezitimeleni, ehamba nge-SBB uhamba phambili.
4) Izitimela zinobungani bemvelo. Ngokuqhathanisa phakathi kwezitimela nezindiza, izitimela zazihlale ziphuma phambili. Izindiza zingcolisa kakhulu umhlaba ngamazinga aphezulu ekhabhoni kanye ne-co2 abayinikezayo. Izitimela ekusetshenzisweni kokuqhathanisa kungaphansi kakhulu kweCarbon footprint kunezindiza.
Chur kuya eThusis Izintengo Zesitimela
Zurich ukuze Chur zemininingwane Amanani
IGeneva iye eChur Izintengo Zesitimela
Amanani eBasel aya eZurich
Uyini umehluko phakathi kweZinga, Ukudlula kosuku, I-Saver Day Pass, ne-Supersaver ku-SBB?
I-SBB inezinhlobo ezahlukene zamathikithi ezabelomali ezehlukene nezinhlobo zabahambi: kungaba ibhizinisi noma ezokungcebeleka. Ungaqiniseka ukuthi elinye lalamathikithi lizokufanela.
Amathikithi ajwayelekile e-SBB:
I Ithikithi le-SBB elijwayelekile ilula kunawo wonke amathikithi e-SBB. Leli thikithi lesitimela ele-point-to-point 1 indlela noma ukujikeleza. Ngamanye amazwi, ithikithi elijwayelekile le-SBB yikhadi lokuhamba elijwayelekile. Okubaluleke kakhulu, leli thikithi lesitimela lisebenza usuku lonke olikhethile ngesikhathi sokuthenga, futhi kuze kube 5 ngakusasa. Ngaphezu kwalokho, ungathenga ithikithi le-SBB-to-point lamakilasi oku-1 nawesi-2. Enye inzuzo enkulu yalelo thikithi lokukhomba ekhomba ukuthi izingane zize zikhule 6 ukuhamba mahhala. Ngamanye amazwi, ungahamba noma yikuphi lapho ufisa khona futhi kunoma yisiphi isigaba, ohambweni lwakho olusuka ku-A luye ku-B.
I-SBB Day Pass ne-Saver Day Pass Amathikithi:
Nekhadi lokuhamba le-Saver Day Pass, ungakhokha okuncane okungama- € 27 ngohambo ngalunye. Ithikithi leDay Pass litholakala kuphela uma ulithola kusenesikhathi, azitholakali esiteshini sesitimela, kusenesikhathi 60 ezinsukwini ngaphambi kosuku lwakho lokuhamba. Ungabuye futhi u-ode lolu hlobo lwethikithi lesitimela ngosuku ngaphambi kohambo. Ngaphezu kwalokho, Ithikithi leSaver Day Pass lisebenza ezikebheni, amabhasi, noma uhambo lwethilamu.
I-SBB Supersaver Amathikithi:
Lesi sigaba samathikithi asiguquguquki njengethikithi lesitimela le-Standard SBB, kodwa eshibhile kunamanye amathikithi esitimela. ISupersaver SBB Ticket inikela kuze kube 70% isaphulelo kumathikithi ajwayelekile. Ngokuphikisana nethikithi elijwayelekile lesitimela, lolu hlobo lwethikithi lunikeza imali ephansi kakhulu ohambweni oluthile olusuka ku-A luye ku-B. Okushoyo, awukwazi ukuphuma nokuvala kunoma yisiphi isiteshi, ngaphandle kweziteshi ozibhukhe kusengaphambili.
Ikhadi lokuhamba le-Day Pass likunikeza ukuguquguquka ngosuku lokuhamba. Ngamanye amazwi, ungahamba noma kunini lapho ufisa, ngosuku losuku lokuhamba.
Amanani entengo eBern kuya eZurich
Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-SBB?
Izakhamuzi zasendaweni kuphela ezingathenga ikhadi lokuhamba le-GA, okuyikhadi elilodwa lakho konke. Ikhadi lokuhamba le-GA livumeleke ngomhla ka- konke ukuthuthwa komphakathi eSwitzerland.
– Izibali zamathikithi e-SBB.
– Kwinsizakalo yamakhasimende yendawo ye-SBB 848 44 66 88
– Kusuka kubasebenzi abasezitimeleni nasemabhasini akwa-SBB.
I-Familia GA Travelcard
Izingane kanye nabantu abadala kuze kube seminyakeni yobudala 16 futhi abazali babo bangajabulela izaphulelo kukhadi lokuhamba leFamilia GA. Leli khadi liyatholakala uma okungenani ilungu elilodwa lomndeni linalo leli khadi lokuhamba le-SBB.
Bonke abaphethe iFamilia GA bajabulela amanani anciphiswe kakhulu elinye ikhadi lekhadi le-GA. Ngaphezu kwalokho, umndeni unganquma ukuthi uyafisa yini ukuthenga iFamilia GA yekilasi lokuqala noma lesibili.
Uma 25 kumayelana nokuzijabulisa, futhi manje unekhadi elingu-seven25, ungahamba ungenamkhawulo kusuka ku- 7 pm. Okushoyo, Leli khadi lokuhamba livumeleke phakathi 7 pm it 5 ngi. Ngakho, isebenza kanjani? I-seven25 ilayishwe ekhadini lakho lokuhamba laseSwitzerland Pass futhi ungalisebenzisela noma ikuphi ukuma.
Kufika isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba i-SBB ifike?
Ukuthola i-SBB yakho futhi ube nesikhathi esifanele, ujantshi utusa ukuthi ufike okungenani 1 ihora ngaphambi kokuba isitimela sakho se-SBB sihambe. Thina kwaSave A Train kwazise sihambe kakhulu ezitimeleni zeSBB, batusa ukufika ngisho 30 imizuzu kusengaphambili, ngakho-ke awudingi ukushesha udlule eziteshini ezinkulu zezitimela ukubamba isitimela. Ngaphezu kwalokho, ihora yisikhathi esanele ngokwanele sokujabulela izitolo nezitendi zokudla futhi uthole lezo zinto ozidingayo uhambo lwesitimela ukuze lubushelelezi ngangokunokwenzeka.
Yini amashejuli wesitimela se-SBB?
Ungathola ngesikhathi sangempela ekhasini lethu eliyisiqalo ku-Londoloza Isitimela. Mane uthayiphe indawo yakho yamanje nendawo oyifunayo, futhi sizokukhombisa imininingwane ebuyekeziwe yamashejuli wesitimela.
Yiziphi iziteshi zezitimela eziphakelwa yi-SBB?
Kukhona ngaphezulu 10 iziteshi ezinikezwa izinsizakalo zezitimela ze-SBB.
Isiteshi seZurich se-SBB yiZurich Central Station (Igama lendawo nguZurich HB). Lesi yisiteshi esikhulu sezitimela se-SBB eZurich futhi sitholakala enhliziyweni yeZurich, eduze UMfula iLimmat.
IBern idolobha elikhulu laseSwitzerland kanye nesiteshi sesitimela esiseduzane ne-University of Bern eLanggasse Quarter.
EGeneva Namuhla Izitimela ze-SBB suka futhi ufike usuka eGeneva Central Station, enkabeni yedolobha.
I-Basel Isiteshi se-SBB yisiteshi esikhulu somngcele eYurophu. Lokho kusho ukuthi Kusuka eSwitzerland, ungaya eJalimane, France, E-Austria, kanye neNetherlands ngensizakalo yesitimela se-SBB. Okubaluleke kakhulu, bangu 50 izitolo nezindawo zokudlela esiteshini saseBasel, lapho ungathenga khona konke okudingayo ohambweni. Ngokwesibonelo, ungathenga ukudla okulula nezikhumbuzo zomzuzu wokugcina. Kusuka esiteshini seBasel SBB, neziteshi ezinkulu ongazihambela ziyiFrankfurt, Paris, naseSalzburg.
Imibuzo Evame Ukubuzwa yeSBB
Ingabe Amabhayithi Avumelekile Ebhodini Izitimela ze-SBB?
Amabhayisikili avunyelwe ezitimeleni ze-SBB. Ungabathengela ithikithi esiteshini, futhi ubhalise ibhayisikili njengomthwalo noma ulibhekise esitimeleni njengempahla yezandla.
Ingabe Izingane Zihamba Khulula Ezitimeleni ze-SBB?
Yebo kwezinye izimo, ohamba nezingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha bahamba mahhala. Ngaphezu kwalokho, izingane ezineminyaka eyisithupha, kuze kufike kubo 16 uhambo lokuzalwa lwentengo emaphakathi.
Ingabe Izilwane Ezifuywayo Zivunyelwe Kuzitimela Ze-SBB?
Yebo, izinja zivunyelwe inqobo nje uma zihamba ngebhokisi lomgibeli noma iveni yemithwalo.
Yiziphi izinqubo zokugibela ze-SBB?
Kufanele ufike esiteshini okungenani 1 ihora ngaphambi kwesikhathi sokuhamba kwesitimela sakho, futhi ukhombise umhloli wamathikithi umazisi ukuze aqinisekise.
Imibuzo evame ukubuzwa ye-SBB – Ngingakwazi ukugcina isihlalo kusengaphambili ku-SBB?
Wena kungaba gcina esitimeleni a ngiyazingesikhathi ngaphambili kuze kufike ku- 5 abagibeli ngentengo ye- € 5 isihlalo ngasinye. Nokho, ukubhuka kumele kube ngaphansi kwegama lomuntu ohambayo.
Ingabe ikhona insiza ye-Wi-Fi ngaphakathi kwe-SBB?
Yebo. Ungajabulela Mahhala I-Wi-Fi service kuzo zonke izitimela ze-SBB nawo wonke amakilasi okuhamba kuze kufike ku- 60 amaminithi.
Uma ufundile kuze kube manje, uyazi konke odinga ukukwazi ngezitimela zakho ze-SBB futhi ukulungele ukuthenga ithikithi lakho lesitimela le-SBB Londoloza Isitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml futhi ungaguqula i- / de to / nl noma / fr nezilimi eziningi.